Madaxweynaha Soomaaliya oo casho sharaf loogu sameeyay magaalada Garoowe +SAWIRRO - calanka.com
Madaxweynaha Soomaaliya oo casho sharaf loogu sameeyay magaalada Garoowe +SAWIRRO (Calanka.com) - Posted at 29/04/2013 By Bashka
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka qeybgalay casho sharaf lagu soo dhoweynayay oo loogu sameeyay Madaxtooyada Garoowe ee Puntland.
Waxaa ka qeybgalay cashadan Madaxweyne Xasan Sheekh, C/raxmaan Faroole Madaxweyne ku xigeenka Puntland ,gudoomiyaha Barlamanka PL, wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan Dowladda Federaalka iyo Puntland ,madaxda safaarada Ethiopia iyo qeybaha kale ee bulshada.
Madaxweynaha Puntland Cabdiraxman Faroole ayaa ka soo jeedshay khudbad dheer uu kaga hadlay Puntland , Dowladda Federaalka , Amaanka, hirgelinta nidaamka Federaalka ,wax soo saarka khayraadka dabiiciga iyo Xisbiyada Puntland.
Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud oo soo xirey xafladan ayaa ka hadlay qaabka Federaalka Soomaaliya,waxana uu sheegey in xalka Somalia uu ku jiro gacanta Somalida.
Ujeedka Booqashadiisan Garowe ayuu ku micneeyey Xasan Shiikh wadatashi ku aadan shirka London oo Somalia lagu taageerayo islamarkaasina dib loogu soo celinayo dalka wajahada dalalka caalamka iyo sidii looga hadli lahaa arrimaha Federaalka, wax qeybsiga iyo dhismaha hay'addaha dowladda.
Lama shaacin ilaa iyo hada intay qaadaneyso booqashada Xasan Shiikh ee magaalada Garowe , waxana war ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegey inay qayb ka tahay socdaal uu ku marayo gobollada dalka isagoona horey u tagay gobolada Hiiraan iyo Bay.